Mucaaradka Britain Oo Falalka Argagixisada La Xiriiriyay Dagaallada Uu Dalku Ka Wado Dibadda | Maalmahanews
Mucaaradka Britain Oo Falalka Argagixisada La Xiriiriyay Dagaallada Uu Dalku Ka Wado Dibadda
May 26, 2017 - Written by admin
Hargeysa(Maalimaha)May,26,2017- Hogaamiyaha xisbiga Shaqaalaha ee Britain Jeremy Corbyn ayaa lagu wadaa in uu sheego in haddii uu xisbigiisu la wareego talada dalka ay yaraan doonto halista soo foodsaarta.
Iyadoo ololaha doorashada uu dib u billowday kaddib weerarkii magaalada Manchester, ayaa hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn wuxuu ka hadli doonaa xiriirka ka dhaxeeya dagaallada dibadda iyo argagixisada ka jirta Britain.
Khudbad uu Corbyn jeedin doono ayuu ku xusi doonaa in dagaalka ka dhanka ah argagixisada uusan shaqeyneynin.
Corbyn ayaa horay uga soo horjeedsaday faragalintii milatari ee UK ay ku samaysay Ciraaq iyo Afghanistan wuxuuna diiday in uu u codeeyo in la duqeeyo Liibiya iyo Suuriya.
Wasiirka ammaanka Ben Wallace ayaa BBC-da u sheegay in hadallada Corbyn ay yihiin kuwo aan habbooneyn oo aan waqtigooda la joogin.
Dhanka kale Raysal Wasaare Theresa May ayaa shir-guddoomin doonta madal looga arrinsanayo ka hortagga argagixisada oo ay isugu imaanayaan madaxda waddamada G7, taas oo maanta lagu qabanayo magaalada Sicily, ee dalka Talyaaniga.
Waxaa la filayaa inay diiradda saarto waxa la sameyn karo si wax looga qabto khatarta ay leeyihiin kooxaha xagjiriinta ah.
Corbyn ayaa khudbaddiisa jeedin doona xilli xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalkaas ay dib u bilaabeen ololahooda, ka dib weerarkii bambaano ee habeennimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester, kaas oo ay ku dhinteen 22 qof, oo ay carrruur u badnaayeen, waxaana ku dhaawacmay 116.